Iingcebiso zePhulo lokuThumela nge-imeyile, imizekelo, ubalo kunye neyona mikhwa ilungileyo | Martech Zone
Iingcebiso zePhulo lokuThumela nge-imeyile, imizekelo, ubalo kunye neyona mikhwa ilungileyo
NgoMvulo, Matshi 14, 2016 NgoMvulo, Matshi 14, 2016 Douglas Karr
Njengomthengisi, sihlala sityhala ibhetshi kunye nokuqhushumisa ii-imeyile kubabhalisi bethu ukubazisa malunga nentengiso okanye ukubagcina behlaziywa kwiimveliso okanye iinkonzo zethu. Ukuba sihambile phambili, sinokude sihlengahlengise kwaye sizenzele ezi imeyile. Nangona kunjalo, ii-imeyile zisathunyelwa ngokusekwe ishedyuli yethu, hayi ababhalisile. Imikhankaso yokuhambisa i-imeyile iyahluka kuba zithunyelwe okanye zihambile ngokusekwe kumbhalisi, hayi thina. I-imeyile ye-drip isebenza-ivelisa i-3x inqanaba lokucofa kwi-imeyile yokuthengisa eqhelekileyo
Yintoni uMkhankaso wokuThumela i-imeyile?
Imikhankaso yokuhambisa i-imeyile luthotho lwee-imeyile ezizenzekelayo ezibhalwe kwangaphambili ezenziwa xa umntu obhalisileyo entsha ongezelelwa kwiphulo lokondla okanye umntu obhalisileyo ngoku eguqula indlela abaziphethe ngayo kwaye aqalise ukukhulisa, ukukhulisa okanye ukugcina umkhankaso we-imeyile. Ii-imeyile zinokuza ngamakhefu acwangciswe kwangaphambili okanye kutshintsho kwindlela yokuziphatha komrhumi, okanye zombini.
Iinkampani ezigqwesa kwintengiso yedrip zivelisa ukuthengisa okungaphezulu ngama-80% nge-33% yexabiso eliphantsi. Kule infographic evela kwiimonki ze-imeyile, Babonisa zonke izibonelelo ezinikezelwa yimikhankaso ye-imeyile:
Unamandla unxibelelwano oluzenzekelayo Umjelo wokufikelela kwaye ugcine unxibelelana namathemba.
Ukwazi ku ukubandakanya amathemba kwaye uziguqulele kwintengiso kunye nentengiso zikhokelo ezifanelekileyo.
Ukukhulisa ubudlelwane ngaphandle kokubandakanyeka ngokuthe ngqo komntu.
Yakha ukuthembeka nokuthenjwa ixesha elingaphezulu ngaphambi kokuzibandakanya kuthengiso lweemonologue.
ekuhambiseni TOFU, MOFU, kunye neBOFU kuwo onke amanqanaba kwaye uchonge amathemba exabiso eliphezulu, amathuba okuguqulwa kula mathemba kunye nokufumana ezinye iiseti zedatha ezininzi.
Nciphisa ukwenza isigqibo ngexesha lohlahlo lwabiwo-mali.
I-infographic inikezela ukuqonda kwiingcebiso kunye neendlela ezilungileyo ekukhuliseni zikhokelela kwinqanaba ngalinye lokuguqulwa kwefaneli, yeyiphi isampulu yokusebenza kwe-imeyile yokuhamba komsebenzi ekhangeleka ngathi, zeziphi izinto ekufuneka uzivavanye kwimikhankaso yakho ye-imeyile, iimpazamo eziqhelekileyo zokucwangcisa i-imeyile, kunye nokondla kunye nokudalwa kwe-imeyile ezona ndlela zilungileyo.
tags: i-imeyileUmkhankaso we-imeyiledrip imeyile yokuhamba komsebenziUkuthengisa ukuthengisa nge-imeyileUkuhambisa ukuhamba kwe-imeyileukuhamba kwe-imeyile
Mar 19, 2016 ngo-2: 59 AM
Ifomu yakho yomrhumo ayisebenzi.
Mar 19, 2016 ngo 12:40 PM
Enkosi kakhulu ngokusazisa!